grinder yommbila yokudla kwenkukhu,ukufuya izinkomo,inkukhu yokudla eyondlayo iyathengiswa
Kuyisigaba esibalulekile sokuchoboza izinto zokwakha ukwenza ukudla kwezinhlanzi. Inqubo yokuchotshozwa yandisa indawo engaphezulu yempahla eluhlaza engasiza ekwandiseni ukugcwala kokuphakayo ujusi wokugaya ukudla kanye nokukhuthaza ukugaya kwesilwane. Okwamanje, usayizi wezinhlayiyana zezinto zokwakha uzolithonya kakhulu ikhwalithi nobunzima besigaba sokusebenza esizayo, njengokubumbana. Njengoba inqubo yokuchoboza i-akhawunti ye 50%-70% kokusetshenziswa kwamandla okuphelele ekwenzeni okuphakelayo kwe-potrate, ukusebenza kahle, ngezinga elikhulu, inquma izindleko zokukhiqiza. Abatshalizimali bayithatha njengento ebalulekile yokwazisa izindleko zokukhiqiza, ikhwalithi yokuphakelwa kwezinhlanzi kanye nentengo yokuphakelayo. I-Droplet yethu grinder yethu yokudla kwezinkukhu nokudla kwezinkomo iyakwazi ukuchoboza izinto ezingavuthiwe zazo zonke izinhlobo zokudla kwezilwane ezenziwa ngobhongwane, njengembila, umunyu, okusanhlamvu, i-legume, kushaye ikhekhe, nezinye izinto zokwakha. I-grinder yommbila yokudla kwezinkomo nokudla kwenkukhu yenzelwe ngokukhethekile ukugaya okuhle kwezinto zokwenziwa ngeselula, futhi lezo zinto zokwenziwa ezinokuqukethwe okuphezulu kokungcola no-oyela. Kuyinto engenakuphikwa umshini wokudla izinhlanzi ekudleni okusantanta kwezinhlanzi, ukucwilisa izinhlanzi kanye nenqubo yokwenza izinhlanzi ezifuywayo.
1. Izinto ezingavuthiwe zingena egumbini elichobozekayo ngokusebenzisa i-feed hopper futhi zibanjwa lapho zize zincishiswe ngosayizi wokuvuleka esikrinini , futhi kukhona izando ezivuthayo eziphuma ngokushesha okukhulu futhi eduze kwesikrini esenziwe ngamafutha.
2. Ngaphansi kokushayela komoya, izinto eziphukile zihamba ngokujikeleza kwangaphandle futhi zinokushayisana okuqhubekayo nokushayisana ngokumelene nesando, ipuleti elinamanzi nosizi, bese impahla ephukile ichotshozwa. Lapho usayizi oyizinhlayiyana ungaphansi kobubanzi bezimbobo zesikrini, i-feed powder izodlula esikrinini.
3. Ukuhlakazwa kwezinhlayiyana ku-fan, futhi imikhiqizo ishaywa ngesiphepho futhi idluliselwa ezikhwameni zokugcina ezingaphansi kwebutho lokusebenzela abalandeli abasebenzayo.